सिजनमा गिट्टी चालेर खाने हामीले घर कसरी बनाउने ? « Janata Samachar
सिजनमा गिट्टी चालेर खाने हामीले घर कसरी बनाउने ?
प्रकाशित मिति : आश्विन २६, २०७७ सोमबार
झापा । गत असारमा शिवसताक्षी वडानम्बर १० माईबगरका सुकुमबासी दलित दुर्गा मुसहरको घर माई नदीमा आएको बाढीले बगायो । तीन दशकदेखि बस्दै आएको घर खोलामा विलय भएपछि उनको चारजनाको परिवार नदीको तटीय क्षेत्रमा टहरा बनाएर बसेको छ ।
त्यसयता घरपालुवा जनावर पाल्न बनाइएको गोठजस्तो परालले बेरेको छाप्रोमा दुर्गा मुसहरको परिवार बस्दै आएको छ । वरिपरिबाट भित्र छिर्न सक्ने छड्के पानी छल्न गुन्द्री लगाइएको छ भने माथिबाट रेडक्रसले दिएको त्रिपाल ओढाइएको छ । भित्र एउटा मात्रै ओछ्यान र खाना पकाउने ठाउँ छ । चारजनालाई सुत्न एकदमै मुस्किल पर्छ । बर्खायाममा पानी चुहिएर रातभर सुत्न नसकिने मुसहर बताउँछिन् ।
पानी परेको वेला चुहिएर सुतिसक्नु नहुने दुर्गा बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘हावा आउँदा त्रिपाल समाएर बस्नुपर्छ । अरू वेला पनि सर्प आउँछ कि भन्ने डरले केटाकेटी जोगाउनै मुस्किल हुन्छ ।’ कोरोना महामारीले रोजगारी पनि खोस्यो । अहिले दिनमा एक छाक खाएर भए पनि बस्नुपर्ने अवस्था छ,उनले भनिन् ।
दैनिक काम खोज्दै हिँड्ने दुर्गाका श्रीमानले अब माई नदीमा गिट्टी कुटेर परिवारले चलाउने योजना बनाएका छन् । बाढीले भएको जति सबै बगाएपछि अहिले उनको परिवारमा खान पनि धौधौ छ । ‘अलिकति ओतसम्म लाग्ने घर भएको भए पनि हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘जग्गा एक चपरी छैन, अरूकहाँ घर बनाउन पनि दिँदैनन् । धन्न यहाँचाहिँ बस्न पाएका छौँ ।’
माई नदीको बाढीले एक वर्षअघि मुसहरका ५ घर बगाएको थियो । यस वर्ष ९ घरसहित १२ घर बगाएको तथ्यांक शिवसताक्षी नगरपालिकामा छ । तर, नगरले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि भने कुनै चासो दिएको छैन ।
मजदुरी गरेर खाने दिलीप ऋषिदेवको घर खोलाले बगाएको एक वर्ष भयो । साथमा साना नानी छन् । वरिपरि टिनले टाटी लगाइएकाे दिलीपको घरमा बर्खामा पानी चुहिएर खपिसाध्यै हुँदैन । हिउँदमा चिसोले बच्चालाई जोगाउनै मुस्किल परेको उनको भनाइ छ ।
पानी पर्न थालेपछि आफू भिजेर भए पनि बच्चालाई न्यानो लुगामा बेरेर सुरक्षित गर्ने गरेको उनले बताए । ‘अस्ति १० किलो चामल ल्याएर दिए । बरू त्यसको सट्टा एउटा घर बनाइदिए हुने थियो । बरू एक–दुई दिन नखाएरै बस्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिजनमा गिट्टी चालेर खाने हामीले घर कसरी बनाउने ?’ आजको नयाँ पत्रिकाबाट ।
‘नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा बोलेका नरभानेलाई नेपाली सेनाले मानार्थ पद किन दिने ?’
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भारतको प्रधान सेनापति मनोजमुकुन्द नरभानेको नेपाल भ्रमण सान्दर्भिक नभएको
सर्वसाधारणले पनि ठूला चाडपर्वका लागि रकमको जोहो गर्ने र यही समयमा बढी खर्च गर्ने गरेको
कोहिनुर टेक्सटाइल मिलमा भीषण आगलागी
दायाँ हात र अनुहारमा आगोले पोलेको उनको वीरगञ्जस्थित बयोधा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
पर्यटककाे ध्यान खिच्न सफल कैलालीकाे ‘घाेडाघाेडी ताल’
सदरमुकाम धनगढीदेखि १ घण्टा र नेपालगञ्जदेखि ३ घण्टामा घोडाघोडी पुग्न सकिन्छ ।
‘नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा बोलेका नरभानेलाई नेपाली…
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भारतको प्रधान सेनापति मनोजमुकुन्द नरभानेको नेपाल भ्रमण सान्दर्भिक नभएको बताउनुभएको छ । नेपालको अतिक्रमित…
सर्वसाधारणले पनि ठूला चाडपर्वका लागि रकमको जोहो गर्ने र यही समयमा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।
भारत र अमेरिकाबीच आदानप्रदान तथा सहकार्य…
भारत र अमेरिकाका वायुसेनाबीचको सहकार्यका लागि यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
आईपीएल क्रिकेटमा सन्दिप लामिछाने आवद्ध दिल्लीकाे…
दिल्लीलाई हराउन सके हैदराबादको अंक तालिका समेत सुधार हुनेछ ।
कोरोना संक्रमणबाट थप चार जनाको मृत्यु
चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
काेराेना महामारीपछि एक लाख २२ हजार…
कोरोना महामारीले काम र कमाई गुमाएका तथा स्वदेश फर्कन चाहेका नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किएकाे बताइएकाे छ । स
तपाईँको यो साता (कात्तिक ९ देखि १५ गतेसम्मको राशिफल)
बिहारमा भोट माग्दै गरेका उम्मेद्वारको गोली हानी हत्या
कम्युनिस्ट नेता मैनालीको निधन
पर्सामा नेकपा कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा घाइते एक जनाको मृत्यु
सेना र प्रहरीबीचको भिडन्तमा दश सुरक्षाकर्मीको मृत्यु
कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु
नेकपा सांसद निरुदेवी पाल कोरोना संक्रमणमुक्त
तातोपानी नाका बुधबारदेखि पुनः खुल्ने
चाडवाडको समयमा इन्धन डिपोहरू आवश्यकता अनुसार खुल्ला
बालबालिकाहरुलाई जबर्जस्ती खाना खुवाउनु गलत